नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडाै‌सहित देशभर मसाल जुलुस, कहाँ के भयो ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा – List Khabar
Home / समाचार / नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडाै‌सहित देशभर मसाल जुलुस, कहाँ के भयो ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडाै‌सहित देशभर मसाल जुलुस, कहाँ के भयो ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
admin November 16, 2021 समाचार Leaveacomment 53 Views
काठमाडाै‌ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्न्युनिष्ट पार्टीले भोलि कार्तिक ३० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । जनताले दैनिक जीवनसँग जोडिएका पेट्रोलियम तथा खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक बस्तुमा नेपाल सरकारले निरन्तर मूल्यबृद्धि गरेको गरेको भन्दै नेकपा त्यसको बिरोधमा भोलि नेपाल बन्दको आव्हान गरेको हो ।
बन्दको पूर्वसन्ध्यामा आज सोमाबर २९ गते साँझ नेकपाले देशभर मसाल जुलुस निकालेको छ । काठमाडाै‌ उपत्यकासहित नेकपा आज देशभर मसाल जुलुस निकालेको सो पार्टीले जनाएको छ ।
नेकपाका अनुसार काठमाडाै‌ उपत्यकासहित कन्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनागढी, डडेल्धुरा, बैतडी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, घोराही, बुटवल, हेटौडा, पोखरा, बिराटनगर, इटहरी, धरान लगायतका मुख्य सहर र सबै जिल्लाहरुमा मसाल जुलुस निकालिएको छ ।
मूल्यबृद्बिजस्ताे अन्यायपूर्ण उत्पीडनलाई मुकदर्शक भएर हेरिरहँन नसक्ने भन्दै नेकपाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। सोहि कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि नेपाल बन्द आव्हान गरिएको हो ।
‘हाम्रो पार्टी जनसरोकारको यो अन्यायपूर्ण उत्पीडनलाईमुकदर्शक भएर हेरिरहँन सक्दैन । तसर्थ सम्पूर्ण मूल्यबृद्धिका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध सङ्घर्षमा उत्रन पार्टीका सबै जनवर्गीय सङ्गठन र समस्त जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै जनभावनाको कदर गर्दै मूल्यबृद्धि तुरुन्त खारेज गर्न सरकारसँग पनि अपिल गर्दछ ।’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ। बन्द सफल पार्नका लागि सहयोग गर्न नेकपाले सबैलाई अपिल गरेको छ ।
Previous भोलि कार्तिक ३० गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल!
Next गल्छी हुँदै काठमाडौं गईरहेको बसभित्र अचम्म भयो, एकजना रङ्गेहात पक्राउ